Inona no ho Vokany Raha Manao ny Tsy Marina Isika?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Macua Malagasy Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mende Mixe Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin (Cameroun) Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Urhobo Uruund Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
“Ho voavaha foana na dia ny olana tena lehibe aza, raha manao ny tsy marina kely fotsiny ianao.”—Samantha, any Afrika Atsimo.
Mitovy hevitra amin’izany ve ianao? Efa nanana olana lehibe hoatran’i Samantha daholo isika rehetra. Mety halaim-panahy hanao ny tsy marina isika indraindray. Izay ataontsika amin’ireny fotoana ireny anefa no ahitana hoe inona no zava-dehibe amintsika. Raha tsy te ho afa-baraka, ohatra, isika, dia mety hieritreritra hoe tsy maninona na manao ny tsy marina aza. Ratsy be anefa matetika ny vokany rehefa mipoitra amin’izay ny tena marina. Ireto ny sasany amin’izany:
LASA TSY ATOKISAN’NY OLONA INTSONY
Mifandray tsara ny olona mifampatoky, ka mahatsiaro ho milamin-tsaina izy ireo. Mila fotoana anefa izany. Lasa mifampatoky ny olona rehefa miaraka matetika, mifampilaza ny marina foana, ary tsy tia tena. Raha manao ny tsy marina indray mandeha fotsiny anefa ny olona iray, dia mety tsy hatoky azy intsony ny olona. Tena sarotra be ny mamerina an’izany.
Efa nisy olona noeritreretinao hoe namanao be ve nefa namitaka anao? Inona no tsapanao tamin’izay? Azo antoka fa nalahelo be ianao, ary mety ho nahatsiaro mihitsy aza hoe namadika anao izy. Ara-dalàna izany! Tsy ho mpinamana be intsony ny olona roa raha manao ny tsy marina ny iray.
MAMINDRA AMIN’NY HAFA ILAY IZY
“Mamindra ilay toe-tsaina hoe tsy tia manao ny marina”, araka ny fanadihadiana nataon’i Robert Innes, mpampianatra toe-karena ao amin’ny Oniversiten’i Kalifornia. Hoatran’ny virosy izy io. Raha mifanerasera matetika amin’ny olona mpamitaka ianao, dia azo antoka fa “hifindra” aminao ny toetra ratsiny.
Inona àry no azonao atao mba tsy ho tratran’izany? Afaka manampy anao ny Baiboly. Handinika toro lalana vitsivitsy avy ao àry isika izao.
Manao ny Tsy Marina ny Olona...
AHOANA IZANY? Milaza zavatra diso amin’ny olona manan-jo hahalala ny marina. Mety ho anisan’izany ny hoe manova na manamboamboatra ny tena marina, tsy milaza ny zavatra tena tokony hampahafantarina, ary manita-dresaka mba hamitahana olona.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Maharikoriko an’i Jehovah ny olona fetsifetsy, fa ny olo-mahitsy kosa no manana fifandraisana akaiky aminy.” (Ohabolana 3:32) ‘Satria efa narianareo ny lainga, dia milazà ny marina amin’ny namanareo avy ianareo tsirairay, fa rantsambatana mifampiankina isika.’—Efesianina 4:25.
AHOANA IZANY? Manaratsy sy manoso-potaka olona, ka lasa manimba ny lazany.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Mampisy fifandirana ny olona manao teti-dratsy, ary ny mpanendrikendrika mampisaraka ny tena mpinamana.” (Ohabolana 16:28) “Maty ny afo rehefa tsy misy kitay, ary mitsahatra ny fifandirana rehefa tsy misy mpanendrikendrika.”—Ohabolana 26:20.
AHOANA IZANY? Mamitaka sy mametsifetsy olona mba hahazoana vola na fananana.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Aza ambakaina ny mpikarama izay tra-pahasahiranana sady mahantra.” (Deoteronomia 24:14, 15) “Izay manambaka ny tsy manana dia manala baraka ny Mpanao azy, fa izay miantra ny mahantra kosa manome voninahitra Azy.”—Ohabolana 14:31.
AHOANA IZANY? Maka zavatr’olona nefa tsy nahazo alalana.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Aoka ny mpangalatra tsy hangalatra intsony, fa aoka kosa izy hiasa mafy, ka hampiasa ny tanany hanaovana asa tsara, mba hanan-javatra hozaraina amin’izay sahirana.” (Efesianina 4:28) ‘Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Fa na mpangalatra, na olona manana faniriana tsy mety afa-po, na mpimamo, na mpanevateva, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra.’—1 Korintianina 6:9, 10.